I-attic ingenye yezindawo eziningi ezingavamile ezisezingeni eliphansi endlini. Ngendlela efanele ekuklanyeni kwalesi sikhala sokuhlala ngaphansi kophahla, ungahle uhlele ikamelo elikhululekile, isifundo noma indawo nje yokuphumula.
Namuhla, imibono eminingi emangalisayo kakhulu engaphakathi kwe-attic iyaziwa. Kulesi sihloko sizokwazisa wena.
Okuthandayo okuphakathi kwe-mansard
Isikhala ngaphansi kophahla sihlukaniswa nesimo esikhethekile sokuphumula. Ngakho-ke, kulula kakhulu ukubeka igumbi lokulala nokuphumula. Ingaphakathi lekamelo lokulala egumbini elisendlini yezitokisi ngezindlela eziningi lixhomeke kuhlobo lophahla kanye nendawo okuvela kuyo indlu. Ekamelweni elinophahla olugxotshiwe, kungcono ukubeka umbhede ewindini elithambekele. Emaceleni ombhede ubukeka ubusuku obukhulu obuphezulu, futhi ngaphansi kodonga lungakwazi ukugqoka i-wardrobe noma isifuba se-drawers.
Emklamo wezakhiwo zangasendlini yendlu yamapulangwe yomhlobiso wezindonga nophahleni, kungcono ukusebenzisa uhlaka ngaphansi kwesihlahla noma ukulingisa ibha. Lesi sinqumo sizoba usizo kakhulu ngaphakathi kwekamelo lokulala noma ihholo egumbini elisendlini yesitimela ngendlela yesitayela. Ngokuhlanganiswa noboya bezembatho nezindwangu kanye nokulingiswa kwelogi, igumbi lizoguqulwa libe "indlu yangempela e-Alps".
Akuthandwa kakhulu namuhla isitayela se-Provence ngaphakathi kwe-attic ngephepha lodonga emapulazini, izindonga ezikhanyayo, izigxobo ezihlobisa izinkuni kanye namakhethini okukhanya asemaceleni.
Abathandi bomklamo wesimanje oqine kakhulu wendlu bazonikeza okuncintisana nendawo yangaphakathi yezakhiwo zangasese. Izindonga zamatshe, ifenisha yokhuni kanye nezindwangu ezincane zisixazululo esihle sokuhlela igumbi lokuzijabulisa nokuzilibazisa.
Ikamelo lokungcebeleka libe yindawo enhle, ekhanyayo futhi ehlelekile yengane. Ekuhleleni ingaphakathi le-nursery e-attic, kubalulekile ukukhumbula ukuphepha. Ama-Windows nezitebhisi kufanele zithembeke, futhi izindonga nophahla zigciniwe. Ukwakhiwa nokuhlobisa izindonga kuncike kuphela ekuthandweni komnikazi wegumbi.
Ngaphansi kwephahla lendlu kungaphinde kube nokulala endaweni yokugezela. Esingaphakathi kwendlu yokugezela egumbini lokungcebeleka, kuyadingeka ukusebenzisa ukuphela kokuthenjelwa ngama-tile, amathayili we-marble noma amapaneli anganqamuki.
Isikhathi esiningi isakhiwo se-attic asikwa ekhishini. Lokhu kulula kakhulu, ngoba konke ukuqhuma nokuphunga okusheshayo kuya efasitela, kungasakazeka endlini. Esingaphakathi kwekhishi elingaphansi kwe-attic kungcono ukubeka ifenisha eguquguqukayo ukuze ulondoloze isikhala. Kunengqondo kakhulu ukusebenzisa izisekelo ezihamba phambili, amakhabhinethi angakhelwe ngaphakathi noma amancane noma ifenisha ene-facade encane.
Ukudweba izindonga endlini
Ungasusa kanjani ilanga elide?
Isihlalo se-Wicker rocking
Ukubeka amathayili odongeni
Yima izicathulo ngezandla zakho
Iminyango yangaphakathi nebubuko
Izindonga ezingenakuzwakala kahle endlini
Igumbi lokulala endlini yesitayela
Imibhede ye-bunk for boys
Ebusika besifazane abashisekayo phansi kwamabhakethi
Yini okufanele ugqoke amabhuzu e-jockey?
Ungakhetha kanjani i-hairstyle ukuze ubhekane nayo?
Imipiramidi yezimali iyisibonakaliso semipiramidi yezimali futhi isebenza kanjani?
Umhluzi we-anyan husks - okuhle nokubi
Kungani inja inemphunga eyomile?
UJennifer Garner akafuni uBen Affleck ukwethula izingane enkosikazi yakhe
Imikhuba engavamile yamakati - izici zokugcina nokunakekelwa
USarafans ngehlobo lika-2014
Amakhambi omphakathi amabhugi embhedeni
UCatherine Heigl wanikeza ukuxoxwa okukhethekile kubantu
Umama uJennifer Lopez wamangaza abasebenzisi be-intanethi
Izipikili ziqhekekile - yini okufanele uyenze ekhaya?
Patch kusuka ama-hemorrhoids
I-Meru National Park
OFakazi BakaJehova - bangobani nokuthi kungani bevinjelwe?
Ama-Sunglasses Abesifazane 2014
U-Irina Sheik: indlela esebenzayo yokuphila - isibambiso sokukhangisa nobuhle